GUDOOMIYIHII GUDIDA DIIWAAN GALINTA OO XILIKII LAGA QAADAY | Toggaherer's Weblog
Gudoomiyihii Gudida Diiwaan galinta Cobixiyayaasha Somalilan Ismaaciil Muuse Nuur Ayaa galaba xilikii laga qaaday u ka hayey gudida diiwaangalinta. Mudane Ismaaciil waxa kale oo uu ka mid ahaa gudida commission ka qaran ee Somaliland.
Maanta galabnimadii shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha commission ka intoodii badnayd ayaa waxaa goaan ay ku gaadheen in ay ka xayuubiyaan xilkii uu ka hayey gudida diiwaan galinta ee ahayd Gumiyanimada.
Ma jiraan war rasmi ah oo laga soo saaray xil ka qadistaa taas oo aanay ka war bixin gudida doorshooyin mar aan is nidhi wax ka waydiiyana noomay suurta galin dhinaca kale mudne Ismaaciil oo isna aanu xidhiidh la samaynay ayaan noo suurta galin sababo awgeed.
Xil ka qaadistan ayaa lagu sababaynayaa murankii shalay dhex maray gudida doorashooyinka iyo xisbiyada mucaaradka taas oo ay soo tabiyeen commissionku warar ay gobolada qaarna tiridii kaga dhimen xaga qaar kalena ay ugu kordhiyeen taas oo ay ku sheegen in ay ahayd datadii ku jirtay severka .